Gacan kahadal ay ku dhaawacmeen 15 qof - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulankii horyaalka kubbadda cagta Hammarby iyo Djurgården. sawir: Christine Olsson/TT
Gacan kahadal ay ku dhaawacmeen 15 qof
La daabacay måndag 5 juni 2017 kl 10.19
Gacan kahadal dhaxmaray dad taageera kooxo kubadacagta ah ayaa dad badan ku dhaawacmeeyn.
Habeenimadkii xalay oo taariikhdu ahayd 4:ta bisha meey ayaa gacan kahadalkan ka bilaabmay makhaaxiyo ku yaala badhtama magaalada Stockholm halkaas oo dad isu adeegsadeen dhalooyin, kuraasi iyo miisasas. 15 ruux ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen dagaalkan, kuwaas oo labo ka mid ahi dhaawac weeyn qabaan, inkasta oo aan wax war ah laga heeyn khatarta uu leeyahay dhaawacoodu.
Dadka gacan kahadalkan ku lug leh ayaa loo maleeynayaa in ay yihiin dad kala taageersan labada kooxood ee Djurgården iyo Hammarby oo xalay ciyaarayey. Dad badan oo shacab ah ayaa makhraati ka ahaa dagaalanka ka dhacay goobtaas. Sidoo kalena dhacdooyin kale oo gacan kahadal ah ayaa la sheegayaa in ay dheceen intii ay socotay ciyaarta dhexmartay Djurgården iyo Hammarby. Lix qof ayaa laga saarey garoonka sida boolisku sheegay markii ay qas geliyeen kala daynbeeynta. Hal qof ayaa isna loo qabtay in uu dagaal kula kacay shaqaale dowladeed.
Booska ayaa hada ku hawlan in ay baadhaan cida ay yihiin dadka dagaalkan ka qeeyb qaatay.
- Waxan haaynaa filimo iyo cadeeyno muujinaya qeeybo ka mid ah dhacdadan. Waxan siiwadaynaa baadhidada ciidii ka denbeeysey denbiyadan, ayuu yidhi Mikael Petterson oo u hadlay booliska deegaanka Stockholm.